“Warra Rageeyfateen Dhufte” -
“Warra Rageeyfateen Dhufte”
bilisummaa April 14, 2013	Leave a comment
“Warra Rageeyfateen Dhufte” (Khutaa 1ffaa)
Dhuma bara 1991, mooraa leenjii dhaaba Adda Islaama Bilisummaa Oromiyaa (AIBO) kheeysatti walgahii yaamamte irratti kan haasaawe, jaarsa areeda diimaa, kan huccuu adii gubbaan imaammata adii marate tokko. Akkuma huccuun isaa addeenyi irraa mullatutti, fuulli isaatiis nuura. Dhugumaani “an-Nuur fowqal nuur” kan ja’aniin sani. Abdulkarim Ibrahim Hamid, Jaarraa Abbaa Gadaa, Sooreeysa Adda Islaama Bilisummaa Oromiyaa kan ture.
“Arra oomishni isin agartan khuni, laaftutti hin dhufne! Dhiigaan dhufte! Lafee dhukkooyteen dhufte! Warra if wareegeen dhufte! Warra rageeyfateen dhufte! Dhibdee adda addaa irra tarkaanfachuun dhufte! Hadhaan dhufte! Arra oomishni kun yoo isin harkaa baate sheenaan isin kheeysaa hin baatu!”
Ummanni akkasumatti lafaa ka’anii takbiira godhu’ seenan. Yeroon san yeroo gammachuu turte. Mengistuun khufe. Amaarri cabe. Ummanni magaalaa fi baadiyyaa idduu “Amaarsaan Amaaraa nu hin nyaatu lammeeysaa..” jechaa dhiichisaa turan. Ammoo eega waraabeysi irraa bu’e, kan itti aanu allaattii akka taate beekkama yoo tahees, yeroo gammachuu san kheeysatti akka if hin wallaalle “yoo isin harkaa baate, sheenaan isin kheeysaa hin baatu” je’ee itti dhaammate Sooreeysi. Akkuma inni je’etti, barri itti aante, bara ibiddaa turte. Magaalaa Dirree Dhawaa kheeysatti Itti gaafatamaan waraana AIBO kan ture, Izzaddiin Muhammad ykn Ibsaa Lubeetti kan beekkamu, fi itti aanaan Sooreeysa AIBO, Sheekh Abdurahman Yuusuf makhinaan isaanii deemuu rasaasni itti banamee, bakkuma sanitti osoo lolanuu dhukaasa Ihadigiin rageeyfatan (ykn shahiidan) waardiyoota isaanii wajjiniin.
Akkasitti lolli bara 1992 baname. January 1992 AIBO’n mootummaa ceehumsaa kheeysaa bahanii waraana Adda Bilisummaa Ummata Tigray (ABUT) kan Mallas Zannaawii dhaan hoogganamtu dhawu eegalan. Waraanni ABUT kan bahaa Harargeetti gad naqamte dhaaba AIBO balleeysuudhaaf duula sakattaa cimaa bante. Yeroo waraanni AIBO magaaloota Oromiyaa kheeysaa baatee dachii strategy qabattu, waraanni Ihadig biiroo AIBO magaalaa Dirre Dhawa taankii fi madaafaan itti marsanii “warreen biiroo kheeysatti haftan harka khannaa, dhaabni kheeysan khufe” jechuudaan ajaja itti khannan. Deebisaa hoggaa dhaban, ammaas maaykro-foonaan itti deebi’ani “dubbiin dhumte, harka khannadhaa” ja’aniin. Deebisaan isaan arkatan dhukaasaa fi takbiira qofa taate. Akkasitti jalqabamte lolli hadhaawaa tokko, kan guyyaa sadiif itti fufte. Guyyaa sadihiif Gaziiraan dhukaasaa, boonbii fi madaafaa. Makhiinaan kharaa irratti argamtu kan reefkaafi madoo geeysituu fi kan waraana dabalataa fi meeshaan fiddu qofa taate. Guyyaa sadii booda biiroon AIBO daaratti deebitee, qawween hoggaa dhaabbatte, waraanni Ihadig biiroo seenaniiti arkan reefka jara isaaniin loluu ture. Lakkooysi isaanii nama 6 ol hin gehan hoggaa himan. Garuu iimaanaa isaanii wajjiniin nama 600 ol ni tahan. Rabbiin jannataan isaan haa qananiisu.
Warra Rageeyfateen Dhufte (Khutaa 2ffaa)
Ajjeechaa Ibsaa Lubee fi Sheekh Abdurahman, hoogganoota AIBO, yeroo yaadatan ajajaan ol aanaa Falmataa Abbaa Gadaa akki ja’an:
“Yeroo san kheeysatti, na’abni kheenya wanni isaan herregan, addichi tun waan isaanirratti walitti qabamteef jecha, hoogganoota isaanii yoo dhooyne ni facaati yaada ja’u qabaachuu turan. Manaama akkasii qabaachuu turan. Haa tahu ammoo Gooytaan haa galatoomu. Isaan shahiidanii murtii isaanii guutachuun waan daran hidhannoo fi iimaana teenya jabeeysitu taate malee waan nu sodaachiftee hamileee teenya cabsitu taatee hin argamne. Achiin booda, tooftaan san gehuuf dhabnaan, weerara jalqaban.
Gooytatti irkachuudhaan, osoo madaafaa fi taankii hin tahin, Gooytaa waa hundarra jabaa. Wahuma dachiirratti uumamte hundarra jabaa irratti irkannee na’aba dura dhaabbachuudaan akka tuutni na’aba yookhaan waraanni na’aba kheenyaa hoongoodhaan galu goone. Arra na’abni konkolaata meeqa, kan taankii fi meeshaa lolaa meeqa qabu ni khasaare taa’ee.”
Akkuma inni je’e sanitti baatii June, bara 1992 (akka lakkooysa faranjiitti) waraanni Ihadig dhaaba Adda Islaama Bilisummaa Oromiyaa dhabamsiisuu fi Jaarraa Abbaa Gadaa ajjeesuuf karoorfatanii magaalaa Harar eega dhuunfatan booda waraana isii magaalaa irraa gara kibbaatti bobbaafte. Gara kibbaatti kan arkamtu araddaa ykn ona Fadis, handhuura AIBO kan turte. Yeroo waraanni Ihadig humnaan bobbaatee konkolaataa fi meeshaa gurguddoo fe’attee gaara Fadis kheeysa baatu, mujaahidoonni Fadis lafa strategy qabatanii obsaan eeggachaa turan. Eega dhukaasni banamee takbiiraan dhagayamte, Addi Bilisummaa Ummata Tigray akka Gaarri Mullata Tigray hin taane dirqamaani hubatte. Dachii hin beeyne irratti, bakka hin beeyna irraa ibiddi itti shidamaa, dachii qabachuu dhiisanii bakkuma itti baqatan barbaaduu mudatan. Mujaahidoonni Fadis naasuu takka malee harka khannachuurra qoma khannachuu wayya jechaa itti if darbuudhaan waraana humna diinaa bittinneeysanii, hangi baafate sablinaan Harar itti dachaatee kan hafan ammo biyyeen nyaatte. Akka adawwiin guyyaa sablinaa san booda khaaduu hin dandeenye, AIBO’n balaa adawwiirra geeyse viidyoon waraabanii, viidyoo san biyya hundatti facaafte.
Yeroo san waraanni guddaan kan silaa ummanni Oromoo abdatu kan Adda Bilisummaa Oromoo, ajaja hoogganoota isaanii fudhatanii Kaampii kheeysa turan. Eegas booda balaan irra gehees beekkamaa dha. Guyyaa san namni hin beeyne ni hubate hoogganaan qabsoo kan haqaa Jaarraa Abbaa Gadaa akka tahe. Rageeyfattoota (ykn shuhadaa) lola Fadis Rabbiin jannataan haa qananiisu. Akkasumattiis Sooreeysa Qabsoo Bilisummaa Oromiyaa fi qabsaawoota isaan jalatti hiriiranii khufan Gooytaan ol tahee jannatal firdowsiin haa qananiisu. Dhugumatti akkuma isaan ja’anitti laaftutti hin dhufne. Dhiiga rageeyfattootaani magarte malee. Warra khabajaan jiraatee, khabajaan addunyaarraa godaanan sanirraa dhufte. Warra mirgaa fi qabeenya isaanii roorroof laachuu didanii kan biyya isaanii kheeysatti alagaa tahuu mannaa shahiidummaa filachuu wayya jechuudhaan lubbuu takkittii qaban Gooytaaf khannan. “Warra rageeyfateen dhufte” hoggaa ja’an, isaani warri rageeyfate.
Warra Rageeyfateen Dhufte (Khutaa 3ffaa)
Ilma aanaa Jaarsoo, bahaa Harargee. Leenca rageeyfataa kan dhugaaf ragaa bahee.
Abbaa kheenya, abbaa qabsoo, hin galle manaa bahee. Gaara bahee, laga cehee dargaggummaa isaa itti fixee. Taa’uu didee, haalli dhibee jaarsummaan wareegame.
Eertraa dhaqee ol deebi’ee, obboleyyan saa barbaadaaf. Wareegaman, shahiida tahan, Elemoon dhoosee hin hambifne. Soomaali dhaqee ol deebi’e, obboleyyan isaa barbaadaaf. Wal arkatan, wal qabatan, qabsoo finiinsuun hin hafne.
Aadam Tukkaalee beeytanii? Tukkaalee Aadam abbaan saanii. Haqa mullisuudhaaf lafaa ka’ee, ‘Mullis’ moggaasaniif. Mullisuu bira dabree, haqaan dachii sossoosan. Halkanii guyyaa weeraranii Dargii hirriiba dhoorkan. Marxoo ol siyfatanii lolan, khabajaa deebifachuuf. Ummata cunqurfamaa hunda roorroo irraa khaasuuf. Bilisummaa yookhiin du’a jechaa, lolanii lolchiisani. If booda hin deebine takkaa, dhumaniif mirga saanii.
Maayyii irratti Abbaan kheenya, Mullis Abbaa Gadaa magaalaa Moqdishoo kheeysa osoo deemuu hidhattoonni biyya sanii kan Ihadigiif hojjatan rasaasa itti bananii makhiinaan baafatan. Bakkuma sanitti lubbuun irraa baate.
Jazaan isaanii jannata haa tahu. Hujiin isaanii fakkeenya haa tah
Tags AIBO’n Ibsaa IFLO Jaarraa seenaa
Previous Marsaalee Oromoo
Next Seenaa gabaabaa waayee Sooreessaa J Jaarraa Abbaa Gadaa